LEGO တွင်သတိပြုရမည့်အချက်လေးချက် Star Wars ဟယ်လိုနောက်တွဲ
07 / 09 / 2021 08 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 295 Views စာ0မှတ်ချက် 71010 စုဆောင်းထားသော Minifigures, 75288 ကို AT-AT, AT-AT, AT-AT ကို Walker က, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Dartဇ Maul, dathomir, ဟယ်လို, Ren ၏ Knights, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Star Wars, Lego Star Wars ကြောက်စရာပုံပြင်များ, အသေးစား, နတ်ဆိုးများ, သင်တုန်းမောက်, Ren, Savage opress, အရိုးစု, Star Wars, အဆိုပါ Mandalorian
Lego Star Wars ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံပြင်တွေဟာရာဇဝင်ကိုကိုးကားစရာတွေနဲ့ပြည့်နေပုံရတယ် Lego အဝေးတစ်နေရာမှနဂါးငွေ့တန်းတစ်ခု၊ ငါတို့တွေ့ခဲ့တာလေးခုရှိတယ်။
စတင်ထုတ်လုပ်ရန်တစ်လသာကျန်တော့သည် Lego Star Wars ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံပြင်များ၊ နောက်တွဲအသစ် ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး ငါတို့ကိုစောင့်နေတဲ့ကြောက်စရာဇာတ်လမ်းတွေကိုပြဖို့။
သို့သော်လည်း၊ Halloween အထူးပွဲ၌ပထမဆုံးအကြိမ်ကြည့်ခြင်းသည်၎င်းမှမကြာသေးမီအချိန်များကိုပြန်ခေါ်သောစိတ်ဝင်စားစရာမြင်ကွင်းအချို့ကိုလည်းဖော်ပြခဲ့သည် Lego အုပ်စုနှင့် Star Wars ဆင်တူသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောအကောင်းဆုံးလေးချက်မှာ -
Ben Solo သည် Kylo Ren မဖြစ်မီအမှောင်ဘက်မှအင်အားပိုရှိသောအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး သည်ထိုနာမည်ကိုသယ်ဆောင်လာသည်။ Ren ဟုရိုးရှင်းစွာလူသိများသော Knights of Ren ၏ခေါင်းဆောင်ကထုတ်လုပ်သောကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွဲများတွင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် Marvel.
ကာတွန်းနှင့်စာအုပ်များအပြင်ပြင်ပမည်သည့်မီဒီယာတွင်မှမတွေ့ရသေးပါ Lego Star Wars ကြောက်စရာပုံပြင်များ အုတ်ခဲနှင့်ဗီဒီယိုပုံစံဖြင့်သူ၏ပွဲ ဦး ထွက်ကို Ren ၏ Kylo Ren ဖြစ်လာရန်လမ်းကြောင်းသို့ Ben Solo အားမည်သို့ကူညီခဲ့ပုံကို Ren ၏ဇာတ်လမ်းကလာမည့်အထူးတွင်စူးစမ်းလိမ့်မည်။
Dathomir ၏ဌာနေအုပ်စုတစ်ခုအနေနှင့် Nightsisters သည်အမှောင်ခြမ်းကိုကူညီရန်၊ ဘာမဆို p ။arty သည်ထိုအချိန်တွင်သူတို့၏အကျိုးစီးပွားနှင့်အညီ
D သည်၎င်းတို့နှစ် ဦး စလုံးအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိနေသော်လည်းသေးငယ်သည့်ရုပ်သေးရုပ်များမရရှိသေးပါartအနည်းဆုံး minifigure တစ်ခုရှိခဲ့သော h Maul နှင့် Savage Opress - ထို့ကြောင့်သူတို့၏အသွင်အပြင်နှင့်ဒီဇိုင်းများသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ Lego Star Wars စုဆောင်းသူများသည်အနာဂတ်အလားအလာအလားအလာ၏ပထမဆုံးလက္ခဏာဖြစ်သည်။ သို့သော်မည်သည့်အရာမှအတည်မပြုရသေးပါ။
Stormtroopers များသည်အင်ပါယာ၏ရင်းနှီးသောစစ်သားများအတွက်သံချပ်ကာအရိုးစုဝတ်စုံအဖြစ်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာသီ၌ပါ ၀ င်ရန်စိတ် ၀ င်စားသည်ကိုမြင်နိုင်သည်။
ဒီဇိုင်းသည် ၀ င်ရောက်လာသော Skeleton Guy မှခန္ဓာကိုယ်နှင့်ခြေထောက်များကိုငှားသည် စုဆောင်းထားသောအသေးစား ၇၁၀၁၀ စီးရီး ၁၄ တွင် ဦး ထုပ်သည် ဦး ခေါင်းခွံ၏စိတ်ကူးကိုလှုံ့ဆော်သောအဖြူရောင်အသေးစိတ်များနှင့်အသစ်ဖြစ်သည်။ နောက်တွဲနောက်တွဲတွင် Poe သည် ၀ တ်စုံကိုအဘယ်ကြောင့် ၀ တ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အံ့သြသွားစေသည်။
အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော AT-AT crane walker
မော်ဒယ်တွေထဲကတစ်ယောက်ပါ ငါတို့ Mandalorian ရဲ့ဒုတိယရာသီကိုကြည့်ချင်တုန်းဘဲ AT-AT ကရိန်းတုတ်ကောက်သည် သမုဒ္ဒရာထဲမှ Razor Crest ကို ရုတ်သိမ်းလိုက်သည်ကို တွေ့မြင်ရသည့်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်အဖြစ်မှန်ဖြစ်လာသည်။ Lego Star Wars ကြောက်စရာကောင်းသောပုံပြင်များသည်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောရဲတိုက်တွင်အဆုံးစွန်ထိထိမိသည်။
မော်တော်ယာဉ်အတွက်မည်သည့်သတ်မှတ်မှုကိုအတည်မပြုရသေးသော်လည်းအထက်ပါပုံသည်ဒီဇိုင်းသည်သင့်အားသူတို့၏အကူအညီဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ 75288 ကို AT-AT.
← ကျွန်ုပ်တို့၏ LEGO ပုံပြင်များသည် LEGO Foundation ကိုစူးစမ်းသည်